अमेरिकी डलर सहित अन्य देशको मुद्राको दरभाउ यस्तो छ – हेर्नुहोस्..
November 25, 2020 330
उदाहरणको लागी नेपालमा अमेरिक डलको विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारो’बारको सुपरिवेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक” ले गर्दछ ।
विश्वमा अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्र’मण फैलिएसँगै अर्थबजारमा अस्थिरता सिर्जना भएको छ । त्यसैको असर अमेरिकी डलरमा पनि परेको छ ।
शेयर मा’र्केट खस्केको, कच्चा तेलको भाउमा गि:रावट आएको, सुनमा लगानी गर्नेहरु बढेको लगायत कारणले अमेरि’की डलरको भाउ बढेको हो । सुनको माग बढि’रहेको र सुन डलरमा कारो’बार हुने भएकोले यसको असर प्रत्य’क्षरुपमा डलरमा देखिएको हो ।
आज अमेरिकी डलर एकको खरि’ददर ११८ रुपैयाँ १२ पैसा तथा बिक्रिदर ११८ रुपैया ७२ पैसा पुगेको छ । मंगलबार डलर ११८ रुपैयाँ २७ पैसामा खरिद भएको थियो।
यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय ४० रुपैयाँ ३३ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ४१ रुपैयाँ ०४ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १ सय ५७ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५८ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १६ पैसा छ भने बि’क्रिदर ३२ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ।
मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ९० पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ०४ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ८६ रुपैयाँ २४ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ८८ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ।
बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय १३ रुपैयाँ २९ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय १४ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ। कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ भने विक्रीदर १० रुपैयाँ ७१ रहेको छ ।
बिस्तृत रुपमा हेर्नुहोस्
Prevआज मंसिर १० गते बुधबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्..
Nextफुल टिप्न खोज्दा गएको रहेछ पाइलटको ज्यान, घटना देखने प्रत्यक्षदर्शी यसो भन्छन् (भिडियोसहित)
लकडाउनमा काठमाण्डौमा भेटिइन् यति मिठो स्वर भएकी सुन्दरी…( भिडियो हेर्नुहोस)
प्रीति आलेको धमाकेदार गीत भयो भाइरल (भिडियो सहित)
अकल्पनीय,भव्य र विलासी छ किमको जीवन,मोजमस्तीको लागि मात्र छन् २ हजार युवती
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ: पढ्नुहोस् (61649)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (59873)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (51738)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50320)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46244)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (45754)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (37900)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33458)
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य , यस्तो छ आजको सुनको भाउ (31478)
विवाहपछि श्वेता र विजयन्द्रको पहिलो टिकटक ,भिडियो भयो भाईरल, लाखौंले हेरे (भिडियो हेर्नुस्) (31209)
आफ्नै श्रीमान-लाई कुकुरझैँ डुलाउँदै हिँडे-पछि…
कमला घिमिरे र अमृत सापकोटाको अन्तर-बार्तामै चल्यो अहिले सम्मकै कडा दोहोरी (भिडियो सहित)
के हो सरकारी ‘नागरिक एप’, कसरी चलाउने, के-कस्तो सुविधा लिन सकिन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
सामान्य लेखपढ जान्ने बुवाले खुदो बेचेर पढाएका ६ छोराहरु – २ भाई सिडियो ४ भाइ हाकिम
खुसीको खबर ! महानगरपालिकाले आमाको ठेला र रोजगार खोसिदयो अहिले आमाको खातामा ५ लाख जम्मा